Ungayisebenzisa kanjani i-Aprovel yezidakamizwa? > Ukwelashwa nokuvimbela
Amathebhulethi e-Aprovel: ukuthatha futhi kanjani
Uhlobo lomthamo we-Aprovel ngamathebhulethi ahlanganiswe nefilimu: i-oval, i-biconvex, emhlophe noma ecishe ibe mhlophe, ngakolunye uhlangothi aqoshwe isithombe senhliziyo, ngakolunye uhlangothi, izinombolo ezingama-2872 (amaphilisi we-150 mg) noma ama-2873 (amaphilisi angama-300 mg).
into esebenzayo: irbesartan - 150 noma 300 mg,
izakhi ezisizayo: i-microcrystalline cellulose, i-lactose monohydrate, i-hypromellose, i-colloidal silicon dioxide, i-magnesium stearate, i-croscarmellose sodium,
umdwebo wefilimu: i-carnauba wax, imhlophe i-Opadry (macrogol-3000, hypromellose, lactose monohydrate, titanium dioxide E 171).
Into esebenzayo ye-Aprovel yi-irbesartan - isiphikisi esikhethiwe se-angiotensin II receptors (uhlobo AT1), yokutholwa komsebenzi we-pharmacological lapho ukusebenza kwe-metabolic kungadingeki.
I-Angiotensin II iyingxenye ebalulekile yohlelo lwe-renin-angiotensin-aldosterone (RAAS). Ubandakanyeka ku-pathogenesis ye-hypertension ye-arterial kanye ne-sodium homeostasis.
I-Irbesartan ivimba yonke imiphumela ebalulekile ngokomzimba ye-angiotensin II, noma ngabe isendleleni noma imvelaphi yokuhlanganiswa kwayo, kubandakanya imiphumela ye-aldosterone-secreting kanye nemiphumela ye-vasoconstrictive etholakele nge-receptors ye-AT1etholakala ku-adrenal cortex nangaphezulu kwamaseli wemisipha ebushelelezi yemisipha.
I-Irbesartan ayinawo umsebenzi we-agonist1-abamukeli, kepha unobuhlobo obukhulu kakhulu (> ngaphezu kwama-8500-fold) kubo uma uqhathaniswa ne-AT2-abakhangisi abangahlotshaniswa nokulawulwa kohlelo lwethambo nenhliziyo.
Umuthi awuvimbeli ama-enzyme e-RAAS anjenge-angiotensin aguqula i-enzyme (ACE) ne-renin. Ngaphezu kwalokho, ayithinti ama-receptors amanye ama-hormone neziteshi ze-ion, ezibandakanya ukulawulwa kwe-sodium homeostasis kanye nomfutho wegazi.
Ngenxa yokuthi i-irbesartan ivimba AT1-receptors, loop feedback in the renin - angiotensin system is aphazamiseka, ngenxa yalokho ukugxila kwe-plasma kwe-renin ne-angiotensin II kukhuphuka. Lapho uthathwa ngemithamo yokwelapha, umuthi usiza ukunciphisa ukwehla kwe-aldosterone, kuyilapho ungenawo umthelela obonakalayo ezingeni le-potasium esegazini legazi (le nkomba inyuka ngokwesilinganiso ingekho ngaphezu kwe-0,1 mEq / l). Futhi, umuthi awunawo umthelela obalulekile ekugxileni kwe-serum ye-triglycerides, ushukela kanye ne-cholesterol, ukugcwala kwe-uric acid ku-serum kanye nezinga lokukhishwa kwe-uric acid yizinso.
Umphumela we-hypotensive we-Aprovel usuvele ubonakala ngemuva kokuthatha umthamo wokuqala, uba mkhulu emavikini angama-1-2, ufinyelela umphumela wawo omkhulu ngemuva kwamasonto angama-4-6. Ezifundweni zemitholampilo ezinde, ukuphikelela kwesenzo se-antihypertgency kwaphawulwa isikhathi esingaphezu konyaka.
Lapho uthatha umuthi kanye ngosuku ngemithamo efinyelela ku-900 mg, umphumela we-hypotensive unomphumela othembele kumthamo. Uma umthamo unqunyelwe ebangeni le-150 kuya ku-300 mg, i-irbesartan yehlisa umfutho wegazi (BP), ilinganiswe ngenkathi ilele futhi ihlala ekugcineni kwesikhathi sokuphumula kwe-interdose (okungukuthi, ngaphambi kokuthatha umthamo olandelayo, ngemuva kwamahora angama-24) kuqhathaniswa ne-placebo: umfutho wegazi weSystolic ( CAD) - isilinganiso esingu-8-13 mm Hg. Ubuciko., Umfutho wegazi we-diastolic (DBP) - 5-8 mm RT. ct Ekupheleni kwesikhawu se-interdose, umphumela we-antihypertensive uboniswa ngama-60-70% wamanani aphezulu wokuncipha kwe-SBP ne-DBP. Ukwehla okuphezulu kwengcindezi yegazi kungakapheli amahora angama-24 kutholakala ngokuthatha i-Aprovel kanye ngosuku.
Ukwehla komfutho wegazi ezindaweni zokuqamba amanga nokuma kubhekwa cishe ngokulinganayo.
Imiphumela ye-Orthostatic ayivelakancane. Kodwa-ke, ezigulini ezine-hypovolemia kanye / noma i-hyponatremia, ukwehla ngokweqile kwengcindezi yegazi kungenzeka, kuhambisana nokubonakaliswa komtholampilo.
Ukuqiniswa okufanayo komphumela we-antihypertensive ubonwa lapho kuthathwa i-irbesartan ngokuhlanganiswa ne-thiazide diuretics. Ngakho-ke, uma kwenzeka kuncishiswa okwanele kwengcindezi yegazi ezigulini ezithola i-irbesartan monotherapy, ngaphezu kwalokho, i-hydrochlorothiazide ichazwe kumithamo ephansi (12,5 mg) kanye ngosuku. Lapho uthatha le nhlanganisela, ukwehla okwengeziwe kwegazi le-systolic ne-diastolic nge-7-10 ne-3-6 mm RT. Ubuciko. ngakho-ke, kuqhathaniswa neziguli ezithole i-placebo ku-irbesartan.
Ubulili nobudala besiguli abuthinti ubucayi besenzo se-Aprovel. Umphumela wayo uncishiswa kakhulu ezigulini zomjaho weNegroid. Kodwa-ke, lapho imithamo ephansi ye-hydrochlorothiazide ingezwa ku-irbesartan, impendulo ye-antihypertensive kubamele balo mjaho isondela kuleyo yeziguli zomjaho weCaucasian.
Ngemuva kokuyeka ukwelashwa, umfutho wegazi kancane kancane ubuyela ezingeni lawo lasekuqaleni. Umuthi awubangeli ukukhula kwesifo sokuxoshwa.
Kwisivivinyo semitholampilo esisebenza ngokungemthetho esilawulwa nge-multicenter>
Kwenziwa noxilongo lwasemitholampilo olunezakhi ezinhlobonhlobo, olwenziwe ngokungahleliwe, olwenziwa nge-placebo olwaluhlola imiphumela ye-irbesartan ku-microalbuminuria (20-200 μg / min, 30-300 mg / ngosuku) kwiziguli ezinomfutho wegazi ophakeme kanye nohlobo oluhlobene ne-2 sikashukela mellitus (IRMA 2). Lolu cwaningo luhilela iziguli ezingama-590 ezinalezi zifo kanye nokusebenza kwezinso okujwayelekile (i-serum creatinine concentration emadodeni - amaphuzu angu-9 esikalini se-Child-Pugh),
ukungabekezeleli ifa le-galactose, ukusweleka kwe-lactase, i-glucose-galactose malabsorption,
isidingo sokuphathwa kanyekanye kwe-ACE inhibitors ezigulini ezinesifo sikashukela,
ukusetshenziswa okufanayo kwezidakamizwa eziqukethe i-aliskiren ezigulini ezinesifo sikashukela, ukuhluleka okulinganiselwe noma okunzima kwe-renal (isilinganiso se-glomerular filtration rate 2 surface body),
hypersensitivity kuzakhi ze-Aprovel.
isifo senhliziyo kanye / noma i-arteriosulinosis yomtholampilo ebaluleke kakhulu (esimweni sokuncipha ngokweqile kwengcindezi yegazi, ukuphazamiseka kwesikhemikhali kungakhuphuka, kuze kube sekufeni kokuqunjelwa yisifo sohlangothi kanye ne-acute myocardial infarction),
i-hypertrophic obstriers cardiomyopathy,
i-aortic / mitral valve stenosis,
I-hypovolemia / hyponatremia ngenxa ye-hemodialysis noma ukusetshenziswa kwezimpawu zomzimba,
ukunamathela ekudleni okunciphisa umkhawulo wokudla usawoti, noma uhudo, ukugabha (mhlawumbe ukwehla ngokweqile kwengcindezi yegazi),
ukufakelwa kwezinso kwakamuva,
ukwehluleka kwezinso (izinga le-potaziyamu kanye nokugxila kwe-creatinine yegazi kufanele kugadwe),
umsebenzi wezinso ngokuya nge-RAAS, kufaka phakathi i-hypertension ye-arterial kanye ne-stenosis yangaphakathi / yenhliziyo eyodwa yemithambo ye-renal noma ukwehluleka kwenhliziyo okungapheli kwesigaba se-III - IV sigaba sokusebenza ngokuhambisana nesigaba se-NYHA,
ukusetshenziswa kanyekanye kwe-aliskiren noma i-ACE inhibitors (ngenxa yengozi yokuncipha ngokweqile kwengcindezi yegazi, ukuthuthukiswa kokusebenza kokulimala kwe-renal ne-hyperkalemia),
ukuphathwa kanyekanye kwezidakamizwa ezingezona ze-steroidal ezilwa nokuvuvukala, kufaka phakathi i-COX-2 inhibitors ekhethiwe (ubungozi bokusebenza kokulimala kwezinso, kufaka phakathi i-serum calcium nokukhula kokuhluleka kwe-renal, ikakhulukazi asebekhulile, abane-hypovolemia, nomsebenzi wezinso ongasebenzi kahle.
Imiyalo yokusebenzisa i-Aprovel: indlela nomthamo
I-aprovel kufanele ithathwe ngomlomo, igwinye amaphilisi ephelele, ngamanzi anele. Isikhathi sokudla asinamsebenzi.
Ekuqaleni kokwelashwa, i-150 mg ivame ukubekwa kanye ngosuku. Uma umphumela unganele, khuphula umthamo ube ngu-300 mg noma unikeze nge-diuretic (ngokwesibonelo, i-hydrochlorothiazide ngethamo lika-12,5 mg) noma kwesinye isidakamizwa se-antihypertensive (ngokwesibonelo, isibambeli eside se-calcium blocker noma i-beta-blocker.
Nge-nephropathy, iziguli ezinomfutho we-arterial hypertension kanye nohlobo lwe-2 mellitus yesifo sikashukela ngokuvamile zidinga umthamo wokulungisa we-300 mg kanye ngosuku.
Iziguli ezine-hypovolemia enzima kanye / noma i-hyponatremia ngaphambi kokuqokwa kwe-Aprovel kufanele zilungise ukwephulwa kwemali esele.
Ukuhlanganiswa kwe-Aprovel nge-aliskiren noma i-ACE inhibitors kuholela ekuvinjelweni kabili kwe-RAAS. Ukusetshenziswa kwezinhlanganisela ezinjalo akunconyelwanga, ngoba ubungozi bokwehla okukhulu kwengcindezi yegazi, umsebenzi wezinso ongasebenzi kahle nokukhula kwe-hyperkalemia kuyanda. Ukusetshenziswa kwe-Aprovel ngasikhathi sinye ne-aliskiren kubethelwe ezigulini ezinesifo sikashukela kanye nokwehluleka kwe-renal (glomerular filtration rate 2 body surfaces). Ukusetshenziswa kwe-Aprovel kuhlangene ne-ACE inhibitors kuchazwe ngokuphelele ezigulini ezine-nephropathy yesifo sikashukela, akunconywa kuzo zonke ezinye iziguli.
I-Irbesartan ingakhuphula ukugcwala kwe-lithium ku-serum yegazi futhi ikhulise ubuthi bayo.
Ezigulini ezithola imithamo ephezulu ye-diuretics ngaphambi kwe-Aprovel, i-hypovolemia ingahle ikhule, ingozi yokwehla ngokweqile kwengcindezi yegazi ekuqaleni kwe-irbesartan iyanda.
Izidakamizwa ezingahambisani nokuvuvukala (i-NSAIDs), kufaka phakathi ama-inhibitors we-COX-2 akhethiwe, zingawenza buthaka umphumela we-hypotensive we-angiotensin II receptor antagonists, ezibandakanya i-irbesartan. Ezindala, iziguli ezine-hypovolemia kanye neziguli ezinokulimala kokusebenza kwezintso, ama-NSAIDs angadala ukuwohloka kokusebenza kwezinso, kuze kufike ekuthuthukisweni kokwehluleka kwezinso. Imvamisa, lezi zigameko ziyaguqulwa. Kulokhu, ukusetshenziswa kwenhlanganisela enjalo kudinga ukuqapha ngokucophelela umsebenzi wezinso.
Kukhona okuhlangenwe nakho kokusetshenziswa kwezinye izidakamizwa ezithinta i-RAAS, kanye ne-potassium-sparing diuretics, ukufaka i-potassium equkethe usawoti, amalungiselelo e-potassium, namanye ama-ejenti angakhuphula izinga le-potasium (ngokwesibonelo, i-heparin). Kunemibiko ehlukile yokwanda kokuhlushwa kwe-serum potassium. Njengoba kunikezwe umphumela we-irbesartan ku-RAAS lapho usebenzisa i-Aprovel, kunconyelwa ukubheka amanani we-serum potassium.
Ngokusebenzisa kanyekanye amanye ama-antihypertensive agents, ukwanda komthelela we-hypotensive kungenzeka. I-Irbesartan ngaphandle kwemiphumela engemihle isetshenzisiwe yahlanganiswa ne-thiazide diuretics, ama-beta-blockers kanye nabahlala isikhathi eside bethatha i-calcium blockers.
Ama-Analogs we-Aprovel yiFirmast, i-Irbesartan, i-Ibertan, i-Irsar.
Ukubuyekezwa mayelana ne-Aprovel
Ukubuyekezwa mayelana ne-Aprovel kulungile kakhulu. Iziguli ziphawula ukusebenza kahle komuthi, ukwehla okuncike kumthamo wegazi futhi kuthambe kalula ukuphatha - isikhathi esingu-1 ngosuku, ngoba umphumela we-antihypertensive uphikelela amahora angama-24. Imiphumela emibi, ngokuya ngezibuyekezo, ihamba kancane emvelweni. Inzuzo eyengeziwe yesidakamizwa ukungabikhona kokungaphenduki ngokubi kwesimo se-angiotensin-converting enzyme inhibitors (kufaka phakathi ukukhwehlela). Okubi kakhulu kwe-Aprovel kubhekwa njengendleko eziphakeme kakhulu.
Ungayisebenzisa kanjani i-Aprovel yezidakamizwa?
I-Aprovel umuthi ohloselwe ukwelashwa kwe-arterial hypertension kanye nephropathy. Kuvunyelwe ukusebenzisa umuthi wesifo sikashukela. Kulokhu, umuthi awubangeli ukuhoxiswa kwesifo ngemuva kokuyeka ukwelashwa. Umuthi uyatholakala ngesimo samathebulethi, okuvumela odokotela ukuthi bangawulawuli umuthi. Iziguli ngokwazo zingaguqula irejimeni yokwelashwa kwezidakamizwa ngesikhathi esikahle kubo.
Umuthi uyatholakala kumathebulethi e-enteric-camera. Iyunithi yemithi iqukethe i-150, 300 mg yento esebenzayo - i-irbesartan. Njengoba kusetshenziswa izakhi ezisizayo ekukhiqizweni:
i-silloon dioxide e-colloidal dehydrate,
I-membrane yefilimu iqukethe i-carnauba wax, i-macrogol 3000, hypromellose, titanium diabetes noshukela wobisi. Amathebulethi anomumo wokusaqanda we-biconvex futhi apendwe mhlophe.
Kuvunyelwe ukusebenzisa umuthi wesifo sikashukela.
Ngomthamo owodwa ofinyelela kuma-300 mg wesidakamizwa, ukwehla kwengcindezi yegazi ngokuqondile kuncike kumthamo othathwe.
Umphumela we-hypotensive omkhulu ubonwa amahora angama-3-6 ngemuva kokuthatha iphilisi.
I-Aprovel yisidakamizwa esingeqembu le-angiotensin II receptor antagonists. Into esebenzayo umuthi yi-irbesartan. I-Aprovel ifaka futhi izingxenye ezisizayo:
Silica colloidal hydrate.
Ukukhishwa ifomu - amaphilisi aqukethe i-75, 150 ne-300 mg ye-irbesartan.
I-Aprovel ngumenzeli we-antihypertensive (hypotensive) olungisa umsebenzi we-renin-angiotensin-aldosterone system ngenxa yokuvinjwa okukhethiwe kwe-1 subtype yohlobo II angiotensin receptors. Ngokuvimbela ama-receptors angenhla, ukubopha kwe-angiotensin II kubo akwenzeki, futhi ukugcwala kwayo ne-renin ku-plasma kuyanda, ngenkathi kunciphisa inani le-aldosterone ekhishwe. Lo mphumela we-Aprovel uqondile futhi uyisisekelo ekusetshenzisweni komphumela we-hypotensive.
Futhi, umuthi unomphumela ophakathi. Kungenxa yokusebenzisana kwe-angiotensin I-receptors, etholakala epuletini lika-Presynaptic cishe kuwo wonke ama-neuron anozwela. Ukuhlanganiswa kwalezi zinhlaka kuholela ekunciphiseni kokuqukethwe kweplasma kwe-norepinephrine, okuthi, njenge-adrenaline ne-angiotensin, kubangele ukwanda komfutho wegazi.
I-Aprovel futhi ine-hypotensive effect engaqondile, ehlotshaniswa nokukhuthaza okwandayo kwento esebenzayo yesidakamizwa i-AT-2, AT-3, AT-4 ne-AT receptors, inqobo nje uma ama-receptors ohlobo lokuqala evinjiwe. Ngenxa yalokhu, sithola ukunwetshwa kwemikhumbi yezwe nokwanda kokuphuma kwe-ion sodium neyamanzi kumchamo.
Imiphumela emitholampilo eyinhlokookubangelwa yi-Aprovel:
Yehlisa inani eliphelele lokumelana kwemithambo yegazi.
Yehlisa umthwalo ngemuva enhliziyweni.
Ukushintshwa ngokweqile kwegazi le-systolic kwe-pulmonary capillaries ye-pulmonary circulation.
I-Aprovel ine-bioavailability ephezulu, esebangeni lama-60-80%. Ngemuva kokuthi umuthi ungene emzimbeni womuntu ngendlela esetshenziswayo, kuba khona ukumuncwa ngokushesha nokubopha amaprotheni e-plasma, okungena kuwo esibindini. Ngaphakathi komzimba, umuthi utholakala kalula ku-oxidation, okuholela ekwakhiweni kwe-metabolite esebenzayo - irbesartan-glucuronide.
Ngemuva kokuthatha umuthi, umphumela omkhulu we-antihypertensive wenzeka ngemuva kwamahora angama-3-6 futhi uthatha amahora angaphezu kwama-24. Ngosuku, umphumela we-hypotensive uzobe usubekelwe okungaphansi okungu-30-40% uma uqhathaniswa nosuku lokuqala. I-Irbesartan, njenge-metabolite yayo esebenzayo, iyakhishwa ku-bile nomchamo.
I-Aprovel iyatholakala ezibhebheni zomlomo (peros), ezingadingeki ukuhlafuna. Ngemuva kokuyithatha, udinga nje ukuphuza ifomu lomthamo ngamanzi ngenani elanele.
Ekuqaleni kokwelashwa, akukho ngaphezu kwe-150 mg ye-Aprovel evame ukubekwa ngosuku. Sebenzisa umthamo obaluliwe 1 isikhathi ngaphambi noma ngemuva kokudla.
Ngokunikezwa iqiniso lokuthi kukhona amaphilisi aqukethe amanani ahlukahlukene ento esebenzayo, umuntu angalawula kalula izinga lomfutho wegazi nomphumela we-antihypertensive womuthi.Isibonelo, uma isiguli singumuntu osekhulile noma sibhekene ne-hemodialysis, umthamo ophelele we-Aprovel ungama-75 mg ngosuku.
Kubantu abanenkinga yesifo sikashukela sohlobo lwe-2 noma i-hypertension ebalulekile, umthamo wansuku zonke we-150 mg ufanelekile, ongagcina ukhuphuke waba ngama-300 uma kwenzeka ungasebenzi kahle noma ngenxa yezizathu ezithile.
Umthamo ozinzile we-Aprovel ku-300 mg ngosuku yinto evamile ezigulini ezine-nephropathy.
Uma isiguli sinokunye ukulimala kwezinso, mhlawumbe kwe-virus noma i-etiology, ushintsho kumthamo lungasithinta kabi isimo sesiguli kanye nokusebenza kahle kwomuthi (lokhu okugcina kungahlotshaniswa nokulimala kokungasebenzi kwento esebenzayo kanye nama-metabolites ayo).
Ukusetshenziswa kwalesi sidakamizwa izingane, abesifazane abakhulelwe nabancelisayo
Noma yisiphi isidakamizwa esithinta uhlelo lwe-renin-angiotensin-aldosterone, kufaka phakathi i-Aprovel, senqatshelwe ukusisebenzisa ngesikhathi sokukhulelwa, kungakhathalekile ukuthi i-trimester. Uma umama okhulelwe asisebenzisa lesi sidakamizwa ngaphambi kokukhulelwa, umuthi uyakhanselwa bese uxwayiswa ngemiphumela engahle ibe khona (ikakhulukazi eyingozi ezimweni lapho iqiniso lokuthi ukhulelwe laqala sekwedlule isikhathi).
Ngenxa yokuthi ukungakwazi kwe-irbesartan kanye nama-metabolites awo ukungena ezindlekweni zezilwane ezincelisayo, futhi ngawo kufakwe obisini, akufakazelwa ngokomtholampilo, i-Aprovel nayo ayenqatshelwa ukusetshenziswa ngesikhathi sokuqunjelwa.
Kubantu abangaphansi kweminyaka engu-18 ubudala, lesi sidakamizwa siyaphulwa.
I-Aprovel isetshenziselwa ukwelapha:
I-Nephropathy, ekhula ngemuva kwesifo sikashukela.
Umfutho wegazi obalulekile kanye nowesibili.
Kufanele futhi kubhekwe neqiniso lokuthi ngokwanda okubonakalayo komfutho wegazi, i-Aprovel isetshenziswa njengengxenye yokwelapha okuyinkimbinkimbi, ngoba izidakamizwa zamaqembu ahambisanayo kufanele zabelwe ukuqeda i-pathology.
Nge-nephropathy, umuthi usetshenziswa ngenxa yomthelela omuhle ekusebenzeni kwezinso, uhlushwa kakhulu isifo sikashukela.
Umuthi uvunyelwe ukusebenzisa:
Abantu abane-hypersensitive kulo muthi, izakhi zawo.
Abesifazane abakhulelwe futhi abancelile.
Ngokubekezelela ifa le-galactose, ukuntuleka kwe-lactose noma i-malabsorption ye-glucose ne-galactose.
Ngaphezu kwalokho, ngaphansi kokulawulwa okuqinile, i-Aprovel isetshenziselwa i-pathologies enjalo kanye nezimo ze-pathological ezifana:
I-Hypertrophic obstriers cardiomyopathy.
I-Bilateral renal stenosis.
I-Unilateral stenosis yezinso ezisebenzayo kuphela.
Ukwehluleka kwenhliziyo okungapheli.
I-atherosclerotic lesion of the arterial shipping of the brain.
I-Aprovel nayo inemiphumela emibi, evame ukwenzeka ngomthamo ongafanele wesidakamizwa noma ukusetshenziswa okungalawulwa kulezi zimo ezingenhla ze-pathological. Umuthi ungadala:
Ijubane elinamandla legazi ebusweni, elihambisana nokuvela kwe-edema yengxenye ehambisanayo yomzimba womuntu.
I-palpitations yenhliziyo, izinhlungu ezinzima ku-sternum.
Ukuphazamiseka kusuka ezithweni zamapheshana esiswini, okuzobonakala: ukuhlanza, isicanucanu, ukushisa kwenhliziyo.
Ukulimala kwe-pathological kwesibindi okuhambisana nokuphulwa kwezinhlelo zomzimba (i-jaundice, i-hepatitis nezinye izifo).
Ngaphezu kwalokho, ezindaweni zokucwaninga ezigulini ezisebenzisa i-Aprovel ekwelapheni ukwelashwa, kutholakala ukwanda okukhulu kwamazinga we-plasma e-kinine kinase. Ngaphezu kwalokho, lesi simo se-pathological asizange sibangele noma yikuphi ukubonakaliswa kwemitholampilo kubantu. Izimo ze-hyperkalemia zivame kakhulu kwiziguli ezine-nephropathy. Eqenjini elifanayo leziguli, isiyezi orthostatic kanye ne-hypotension, kuzozwakala izinhlungu emgundwini wamathambo. Nge-nephropathy nesifo sikashukela i-mellitus, ama-2% abantu ngezikhathi ezithile banezinga eliphansi le-hemoglobin egazini.
Ukuhambisana nezinye izidakamizwa notshwala
Cabanga ukusebenzisana kwe-Aprovel nezinye izidakamizwa:
Ama-diuretics namanye ama-antihypertensive agents. Lapho usebenzisa izidakamizwa ze-antihypertensive ndawonye, ​​amandla ezenzo zawo ayaqashelwa. Ngaphandle kwalokhu, i-Aprovel isetshenziswa ngama-beta-blockers, ama-blockbade asezingeni le-calcium blockers kanye nama-thiazides. Uma sikhuluma ngezidakamizwa zamaqembu angenhla, awukwazi ukwenza ngaphandle kwe-hydrochlorothiazide, Amlodipine, Nifedipine, Verapamil, Diltiazem, Anaprilin.
Izithako ze-potassium kanye ne-potassium-sparing diuretics. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa zalawa maqembu, kanye nezidakamizwa ezikhulisa izinga le-potasium esegazini legazi kanye ne-Aprovel nezinye izidakamizwa ezithinta uhlelo lwe-renin-angiotensin-aldosterone, kungadala ukwanda ngokweqile kwezinga le-potasium ions ku-serum. Kulezi zidakamizwa, ezisetshenziswa kabanzi yilezi: iSpironolactone, iHeparin, isisindo sayo esisezingeni eliphansi.
Izidakamizwa ezingezona ezingena ezibangelwa ukuvuvukala. Uma usebenzisa i-Aprovel ngezidakamizwa zaleli qembu, ukwehla komphumela we-antihypertensive kuyabonakala. Ama-NSAID adume kakhulu: Lornoxicam, Meloxicam, Nimesulide, Celecoxib.
Ukulungiselela kweLithium. Lapho usebenzisa izidakamizwa zaleli qembu kanye ne-angiotensin-converting enzyme inhibitors, kwanda ukwanda kwengozi yemithi esekwe yinsimbi. Ngesinye isikhathi, ukwanda kwemiphumela emibi kuyabonakala futhi lapho kusetshenziswa amalungiselelo e-lithium kanye ne-Aprovel, ngenxa yokuthi ngayo basebenzisa lokhu kuhlanganiswa kuphela ezimweni ezingandile futhi ngaphansi kokuphathwa okuqinile kwezinga lama-ion wensimbi kwiseramu yegazi.
Ukusetshenziswa okuhlangene kwe-Aprovel notshwala, i-narcotic nezinye izinto eziyingozi akuvunyelwe. Lokhu kungenxa yokuthi umuthi unomphumela we-antihypertensive, futhi utshwala nezimali ezingenhla zisebenza ngendlela ehlukile futhi kuholele ekwandeni kwengcindezi yegazi.
Ngingayithenga kuphi i-Aprovel?
Ungasithenga lesi sidakamizwa ekhemisi noma wenze i-oda ku-Intanethi. Izindawo ezijwayelekile zokuthenga imali:
Intengo umuthi uyahlukahluka esifundeni ama-ruble angama-323-870.
Naphezu kweqiniso lokuthi ikhambi linemiphumela emibi eminingana, lingabizwa ngokuthi enye yezinqumo ezinhle kakhulu ekwelashweni kwezimo ezibucayi zempilo, njenge-hypertension ebalulekile noma i-nephropathy enesifo sikashukela mellitus. Ngaphezu kwalokho, umuthi ungasebenzisana kahle nezinye izidakamizwa.
Lo mkhiqizo ukhiqizwa ikakhulukazi ezibhebheni ezi-oval. Kukhona nezinye izixazululo ze-Aprovel emakethe zokungenela ngaphakathi. Isithako esisebenzayo somuthi yi-irbesartone. Ukwakheka kwalesi sidakamizwa kufaka phakathi:
Amacwecwe e-Aprovel anesisindo esingu-150 mg lilinye. Ungabazi ngokuqopha - inhliziyo ngakolunye uhlangothi izinombolo ezingama-2772 ngakolunye. Futhi emakethe kwesinye isikhathi kubhebhetheka i-Aprovel 300 mg ngayinye.
Uma usuvele emzimbeni wesiguli, umuthi "i-Aprovel" uqala ukuthonya ama-receptors ohlobo 2 angiotensin. Lezi zokugcina zinesibopho sokuqina kwezindonga zomkhumbi. Lapho uthintana nabo, i-enimeens ye-angiotensin ibangela ukunciphisa imisebe yemithambo yegazi. Ngenxa yalokhu, umfutho wegazi uyancipha.
Isici esiyinhloko somuthi we-Aprovel, uma uqhathanisa neminye efana naleso, ukuthi ayihlangani namanye ama-enzyme emzimbeni nhlobo. Ngenxa yalokhu, isiguli esiphuza umuthi sikhombisa izinguquko egazini. Ikakhulu, iplasma ayikhuphi ukuqina kwe-calcium nezinye izinto ezihlukene ezingathinta kabi umsebenzi wesistimu yenhliziyo.
Lo muthi uqala ukusebenza cishe amahora angama-5-6 ngemuva kokungena emgodini wokugaya ukudla. Umphumela we-antihypertensive lapho uthatha i-Aprovel usho phakathi kwezinsuku ezingama-7-14. Ifinyelela inani eliphakeme cishe amaviki ayisithupha ngemuva kokuqala kokwelashwa.
Njengoba lo muthi usebenza kahle, odokotela bavame ukunquma i-Aprovel ezigulini zabo. Ukusetshenziswa kwaso kukhonjisiwe ngezifo ezifana:
i-nephropathy yohlobo 2 sikashukela i-mellitus kanye ne-hypertension ye-arterial.
Endabeni yokugcina, i- “Aprovel” ichazwa odokotela imvamisa njengengxenye yokwelashwa okuphelele kwe-antihypertensive. Odokotela baqaphele ukuthi lo muthi uyakwazi ukuthonya ngokuzuzisa umsebenzi wezinso ezigulini ezinesifo sikashukela.
Umuthi weziguli we-Aprovel ukufanele ukubuyekezwa okuhle. Abaningi bakholelwa ukuthi namuhla iyithuluzi elingcono kakhulu eqenjini labo. Kepha ngeshwa, awukwazi ukuyithola njalo ekhemisi. Uma kungekho lesi sidakamizwa esithengiswayo, kufanele usebenzise izithiyo zalo. Uma kunesidingo, ungaphuza i-analog esikhundleni somuthi we-Aprovel:
Kwesinye isikhathi esikhundleni salo muthi, iziguli zibizwa nangokuthi "Lozap" noma "Valz." Uhlobo lomuthi "i-Irbesartan" (ngesakhiwo esifanayo, kodwa hhayi uhlobo) luyathengiswa nanamuhla.
Lesi yisithasiselo esisebenza kahle se-Aprovel 150 mg no-300 mg. Isithako esikhulu esisebenzayo kuso yi-irbesartan. I-Ibertan itholakala ezibhebheni ze-75, 150 no-300 mg. Inomphumela ofanayo we-pharmacological emzimbeni wesiguli njenge-Aprovel. I-Ibertan kuphela ehlukile kulo muthi ngoba iqukethe ezinye izinto ezengeziwe.
I-Irbesartan nayo ifakiwe ekwakhiweni kwalesi sidakamizwa njengento esemqoka esebenzayo. I-Irsar iyatholakala ezibhebheni. Lapho kuthathwa, isiguli sibelwa nokudla okukhethekile (okunomkhawulo wenani likasawoti osetshenzisiwe). Njengo-Aprovel, umlingani wayo u-Irsar wehlisa umfutho wegazi kahle. Ngaphezu kwalokho, cishe awunawo nomthelela emsebenzini wenhliziyo wesiguli.
Kusho "uLozap" no "Valz"
Imithi i-Firmasta, i-Converium, i-Irsar, ne-Ibertan iyafana ne-Aprovel, ngoba inesakhiwo esifanayo. Izidakamizwa "i-Valz" ne "Lozap", empeleni, ziyizifanekisyo zaso ngqo. Into esebenzayo ihlukile kubona. "I-Valz" ikhiqizwa ngesisekelo se-valsartan, kanye ne "Lozap" - i-losartan potassium. Kodwa-ke, le mishanguzo inciphisa ingcindezi ngempumelelo njenge-Aprovel.
Abakhiqizi kanye namanani
Umuthi i- “Aprovel” ukhiqizwa yizinkampani zemithi zaseFrance iSanofi winthrop industrie neSanofi-Aventis. Kuyafaneleka ukupakisha umuthi onjalo kusuka kumatafula ayi-14 we-150 mg esifundeni se-320-350 p. kuya ngomphakeli. Ngepakethe elinethebhu le-14. I-300 mg emakhemisi imvamisa ibuza cishe ama-450 r.
Kwesinye isikhathi lo muthi uyathengiswa ngamaphakethe ama-28 ama-pcs. Kulokhu, izindleko zayo zingama-600 p. (ngamathebhulethi we-150 mg) nama-850 r. (300 mg).
Vele, iziguli eziningi ezihlushwa umfutho wegazi ophakeme zingathanda ukwazi ukuthi ngabe i-Aprovel inazo yini ezinye izithonjana zaseRussia. Kokufakwa esikhundleni okuxoxwe ngakho ngenhla, kukhiqizwa i-Irsar kuphela ezweni lethu. Ikhiqizwa yinkampani yaseRussia iCanonFarma Production. Lo muthi ubiza cishe nge-100 p. kwezingcezu ezingama-22 ze-150 mg.
Ungathola ukuthi yiziphi izinkampani ezikhiqiza ezinye izidakamizwa ezibhekwe etafuleni elingezansi.
Lezi yizinkampani ezikhiqiza esikhundleni se-Aprovel. Izichazamazwi zalo, njengoba ubona, aziziningi. Okuhle kubo i-Irsar. Kodwa-ke, izindleko zokufakwa esikhundleni sangaphandle kwaleli thuluzi ziphansi.
Odokotela abalunqamuleli umuthi "i-Aprovel" kwiziguli, phakathi kwezinye izinto, futhi uma ibhalansi yama-electrolyte iphazamiseka. Ngaphambi kokusebenzisa umuthi, zonke lezi zinkinga kufanele zilungiswe ngokusetshenziswa kweminye imishanguzo.
Uma umuthi ubekelwe isiguli esinehluleki se-renal, udokotela kufanele ngezikhathi ezithile aqaphe izinga le-serum creatine ne-potassium egazini lakhe. Kwenzeka okufanayo nakubantu abane-hyperkalemia.
Ukwelashwa kweziguli ezinesifo senhliziyo noma isifo sokuqina kwemithambo yegazi esebenzisa le ejenti noma ama-analogue ayo kufanele kwenziwe ngokulawulwa okuqinile kwengcindezi yegazi.
Umuthi "Aprovel": iziyalezo zokusetshenziswa
Lezi zibhebhe zibekelwe iziguli, imvamisa eyodwa ngesikhathi (150 mg) ngosuku. Uma kunesidingo, umthamo ungakhushulwa ufike kuma-300 mg. Ngobuningi obukhulu, lesi sidakamizwa asikaze sinikezwe njengoba singasebenzi. Uma, ngokunyuka komthamo kuya ku-300 mg, umphumela ofiselekayo awenzeki, isiguli sivame ukunikezwa umuthi owengeziwe ovela eqenjini le-diuretics.
Iziguli ezinokuphelelwa ngamandla noma i-hyponatremia ekuqaleni kaningi zichazwa hhayi ngo-150 mg wesidakamizwa, kodwa 75 mg. Futhi, iziguli esezikhulile zivame ukwelashwa ngaleli dosi.
Ngemuva kokuphathwa ngomlomo, umuthi udonswa ngokushesha emathunjini amancane ngo-60-80% womthamo othathwe. Uma ingena egazini, into esebenzayo ibopha amaprotheni e-plasma ngamaphesenti angama-96 futhi, ngenxa yenqubo eyinkimbinkimbi, isatshalaliswa kuzo zonke izicubu.
Amanani aphezulu womphumela wokwelapha we-Aprovel abonwa ngemuva kwamasonto ayi-4-6 wokuphathwa kwawo.
Ukwemukelwa kwe-Aprovel kunqunyelwe i-nephropathy ngemuva kwesifo sikashukela sohlobo 2, okuhambisana nomfutho wegazi ophakeme.
Isidakamizwa asinconywa ukungabekezelelani kwe-lactose, i-lactase.
Okunye futhi ukweqa umthetho ngokuthatha i-Aprovel ukungasebenzi kahle kwesibindi.
Umuthi osebenzayo ufinyelela ekugxileni kwe-plasma ephezulu ngemuva kwamahora 1.5-2 emva kokuphathwa.
Ukuqedwa kwesigamu sempilo kwenza amahora ayi-11-16. Ngaphansi kuka-2% kwengxenye esebenzayo efomini layo lasekuqaleni kudalulwa ngohlelo lobuchwepheshe.
Umthamo wokuqala kanye nokugcinwa ngu-150 mg kanye ngosuku ngokudla noma ngesisu esingenalutho. I-Aprovel ® ngethamo lika-150 mg kanye ngosuku ngokuvamile inikezela ukulawula okungcono kwamahora angama-24 kwengcindezi yegazi kunokutholakala komthamo wama-75 mg. Kodwa-ke, ekuqaleni kokwelashwa, umthamo we-75 mg ungasetshenziswa, ikakhulukazi kwiziguli ezikwi-hemodialysis, noma ezigulini ezineminyaka engaphezu kwengama-75.
Ezigulini ezinomfutho wegazi ongalawulwa ngokwanele emthanjeni we-150 mg kanye ngosuku, umthamo we-Aprovel ® ungakhuphuka ufike kuma-300 mg kanye ngosuku noma esinye isidakamizwa se-antihypertensive singabekwa. Ikakhulu, kwaboniswa ukuthi ukwengeza kwe-diuretic, njenge-hydrochlorothiazide, ekwelapheni nge-Aprovel ® kunomthelela owengeziwe.
Ezigulini ezinomfutho wegazi ophakeme nohlobo 2 lwesifo sikashukela, ukwelashwa kufanele kuqalwe ngomthamo we-150 mg we-irbesartan kanye ngosuku, bese ukuletha kuma-300 mg kanye ngosuku, okuyindlela enhle yokugcina yokwelapha iziguli ezinesifo sezinso.
Umphumela omuhle we-aprovel ® ezinsweni ezigulini ezinomfutho wegazi ophakeme nohlobo II waboniswa ezifundweni lapho i-irbesartan isetshenziswa njengesijobelelo kwezinye izidakamizwa ze-antihypertensive, uma kunesidingo, ukuze kufinyelelwe izinga lokuhlaselwa umfutho wegazi.
Ukwehluleka kwangempela Ezigulini ezinomsebenzi we-renal ophazamisekile, ukulungiswa komthamo akudingeki.Ezigulini eziku-hemodialysis, kumele kusetshenziswe idosi eliphansi lokuqala (75 mg).
Yehlisa ku-BCC. Ukuncipha koketshezi / umthamo wegazi ojikelezayo kanye / noma ukushoda kwe-sodium kumele kulungiswe ngaphambi kokusetshenziswa kwe-Aprovel ®.
Ukwehluleka kwesibindi. Ezigulini ezinobunzima bokulinganisela kwe-hepatic elinganele, ukulungiswa kwamthamo akudingeki. Akunangqondo emtholampilo ngokusetshenziswa komuthi ezigulini ezine-hepatic insuffence engakanani.
Iziguli esezikhulile. Yize ukwelashwa kweziguli ezingaphezu kweminyaka engama-75 kufanele kuqale ngomuthi ka-75 mg, ngokuvamile ukulungiswa kwamthamo akudingeki.
Sebenzisa ezinganeni. I-Irbesartan ayinconywa ekwelashweni kwezingane nentsha ngenxa yedatha enganele ekuphepheni nasekusebenzeni kwayo.
Imvamisa yokusabela okubi okuchazwe ngezansi ichazwe ngale ndlela: kuvamile kakhulu (³1 / 10), kuvamile (³1 / 100, 2% ngaphezulu kweziguli ezithola i-placebo.
Ukwephulwa kohlelo lwezinzwa. Isiyezi esivamile samathambo.
Ukuphazamiseka kwemithambo yegazi I-hypotension evamile ye-orthostatic.
Ukuphazamiseka kwemisipha yemisipha, ukuphazamiseka kwezicubu ezithintekayo namathambo. Ubuhlungu obujwayelekile bemisipha.
Ucwaningo lwelebhu. I-Hyperkalemia kungenzeka kakhulu yenzeke ezigulini ezinesifo sikashukela ezathola i-irbesartan kune-placebo. Ezigulini ezinesifo sikashukela esine-hypertension, zazine-microalbuminuria nomsebenzi wezinso ojwayelekile, i-hyperkalemia (³ 5.5 mEq / mol) yabonwa ku-29.4% (imiphumela emibi kakhulu) yeziguli ezitholwayo
I-300 mg ye-irbesartan, naku-22% weziguli ezithola i-placebo. Ezigulini ezinesifo sikashukela esine-hypertension, saba nokuhluleka kokuqina kwezinso kanye ne-proteinuria enkulu, i-hyperkalemia (³ 5.5 mEq / mol) yabonwa ku-46.3% (imiphumela emibi kakhulu) yeziguli ezithola i-irbesartan naku-26.3% yeziguli ezithola placebo.
Ukwehla kwe-hemoglobin, ebingabalulekile emtholampilo, kwaqashelwa ku-1.7% (imiphumela emibi ejwayelekile) yeziguli ezinesifo somfutho wegazi kanye nephropathy eqhubekayo yesifo sikashukela eselashwa nge-irbesartan.
Imiphumela elandelayo eyengeziwe iye yabikwa ngesikhathi sokucwaninga ngemuva kokuthengisa. Njengoba le datha itholakala kwimiyalezo ezenzakalelayo, akunakwenzeka ukuthola imvamisa yokuvela kwayo.
Ukuphazamiseka kwesistimu yokuzivikela komzimba. Njengakwezinye i-angiotensin II receptor antagonists, hypersensitivity reaction, like rash, urticaria, angioedema, akuvamile ukuthi kubikwe.
Ukwephulwa komzimba kanye nokufakwa kwezakhi zomzimba. I-Hyperkalemia
Ukwephulwa kohlelo lwezinzwa. Ubuhlungu bekhanda.
Ukuzwa kokulimazeka kanye nezinto zokusebenza. Tinnitus.
Ukuphazamiseka Kwesisu. I-Dysgeusia (shintsha ukunambitheka).
Uhlelo lweHepatobiliary. IHepatitis, ukungasebenzi kahle kwesibindi.
Ukuphazamiseka kwemisipha yemisipha, ukuphazamiseka kwezicubu ezithintekayo namathambo. I-Arthralgia, i-myalgia (kwezinye izimo ezihambisana nokwanda kwamazinga we-serum CPK), imisipha yokuncipha.
Umsebenzi wokulimala wezinso nohlelo lokuchama. Umsebenzi wezinso ongasebenzi kahle, kufaka phakathi ukwehluleka kwezinso ezigulini ezisengozini enkulu (bheka "Izici zokusebenzisa").
Engxenyeni yesikhumba nezicubu ezingaphansi. Leukocytoclastic vasculitis.
Sebenzisa ezinganeni. Esifundweni esenziwe ngokungahleliwe ngesikhathi sesigaba esingama-3-blind blind blinds ezinganeni ezingama-318 kanye nasentsheni ezineminyaka engu-6 kuya kwayi-16 nge-hypertension, imiphumela elandelayo elandelayo yabonwa: ikhanda (7,9%), i-hypotension (2.2%), isiyezi (1.9%), ukukhwehlela (0.9%). Ngesikhathi sokutadisha esivulekile samaviki angama-26, ukuphambuka kokujwayelekile kwezinkomba zaselabhoratri bekuvame ukubonwa kakhulu: ukwanda kwe-creatinine (6.5%) kanye nokwanda kwe-CPK (SC) kuma-2% wezingane ezamukelayo.
Isipiliyoni sokusebenzisa lesi sidakamizwa ekwelapheni abantu abadala imithamo efinyelela ku-900 mg ngosuku emavikini ayi-8 asizange siveze ubuthi bomuthi. Ukubonakaliswa kwe-overdose okungahle kuvezwe ku-hypotension kanye ne-tachycardia, i-bradycardia nayo ingaba isibonakaliso se-overdose. Akukho mininingwane ethize maqondana nokwelashwa kwe-Aprovel ®. Iziguli kufanele zigadwe ngokucophelela; ukwelashwa kufanele kube nezimpawu futhi kusekele. Imisebenzi ephakanyisiwe ifaka ukugabha kanye / noma ukukhipha isisu. Ekwelashweni kwe-overdose, ukusetshenziswa kwekhabhoni ocushiwe kungasiza. I-Irbesartan ayikhululwa ngesikhathi sokusebenza kwegazi.
Sebenzisa ngesikhathi sokukhulelwa noma sokukhishwa komzimba
Ukusetshenziswa kwesidakamizwa "Aprovel ®" kukhishwe ku-II ne-III trimesters yokukhulelwa. Kuma-trimesters wesibili nowesithathu wokukhulelwa, ama-ejenti athinta ngqo uhlelo lwe-renin-angiotensin angadala ukwehluleka kwezinso kwengane noma ingane esanda kuzalwa, i-hypoplasia yesikhumba se-fetus, nokufa.
Ngenhloso yokuqapha, akunconywa ukusebenzisa ku-trimester yokuqala yokukhulelwa.
Kuyadingeka ukushintshela ekwelashweni okuhlukile ngaphambi kokukhulelwa okuhleliwe. Uma kutholakala ukuthi ukhulelwe, i-irbesartan kufanele ichithwe ngokushesha futhi
hlola isimo sekhanda le-fetus kanye nokusebenza kwezinso usebenzisa i-ultrasound, uma ukwelashwa okungaqondakali kuhlala isikhathi eside.
Ukusetshenziswa kwesidakamizwa "Aprovel ®" kufakwe uphawu ngesikhathi sokuncelisa ibele. Akukaziwa ukuthi i-irbesartan ikhishwa ubisi lwebele yini. I-Irbesartan ikhishwa ubisi lwegrey ngesikhathi sokuqunjelwa.
I-Irbesartan ifundwe eningini yezingane ezineminyaka eyi-6 kuya kwayi-16, kepha imininingwane etholakala namuhla ayanele ukwandisa izinkomba zayo ukuze zisetshenziswe ezinganeni kuze kutholakale idatha eyengeziwe.
Yehlisa ku-BCC.I-Syndrome ye-arterial hypotension, ikakhulukazi ngemuva kokuthatha umthamo wokuqala, ingenzeka ezigulini ezine-BCC ephansi kanye / noma ukuqina kwe-sodium ephansi ngenxa yokwelashwa okukhulu kwe-diuretic, ukudla okudla okune-usawoti okulinganiselwe, isifo sohudo, noma ukugabha. Lezi zinkomba kumele zibuyiselwe emuva ngaphambi kokusetshenziswa kwesidakamizwa "Aprovel ®".
I-Arterial Renovascular Hypertension.Lapho usebenzisa izidakamizwa ezithinta i-renin-angiotensin-aldosterone, kunengozi eyandayo yokuqalwa kwe-arterial hypotension kanye nokwehluleka kwezinso ezigulini ezinesifo sokuqina kwenhliziyo noma i-stenosis yomthambo wezinso owodwa. Yize amacala anjalo engazange abonwe kusetshenziswa isidakamizwa i-Aprovel ®, ukusetshenziswa kwe-angiotensin I receptor antagonists, imiphumela efanayo ingalindeleka.
Ukwehluleka kwangempela kanye nokufakelwa kwezinso.Uma usebenzisa i-Aprovel ® ekwelapheni iziguli ezinomsebenzi we-renal ophazamisekile, kunconywa ukubheka njalo izinga le-potassium ne-creatinine ku-serum. Akunasipiliyoni ngokusetshenziswa kwe-Aprovel ® ekwelashweni kweziguli ngokufakelwa kwezinso kwamuva.
Iziguli ezine-hypertension ye-arterial, isifo sezinso, nesifo sikashukela sohlobo II . Umphumela we-irbesartan ezinso nasezinhlwini zenhliziyo wawungafani nakuwo wonke ama-subgroups ahlaziywa ocwaningweni lweziguli ezinesifo sezinso esinzima. Ikakhulu, kwavela ukuthi ayibathandisisi abesifazane nezikhonzi zalo mncintiswano ongewona omhlophe.
I-HyperkalemiaNjengazo zonke izidakamizwa ezithinta i-renin-angiotensin-aldosterone, i-hyperkalemia ingaqhamuka ngesikhathi sokwelashwa nge-Aprovel ®, ikakhulukazi lapho kukhona ukwehluleka kwe-renal, proteinuria enzima ngenxa yesifo sikashukela kanye / noma ukuhluleka kwenhliziyo. Ukuqapha ngokucophelela ukugxila kwe-serum potassium ezigulini ezisengozini kunconyiwe.
ILithium.Ngesikhathi esifanayo, i-lithium ne-Aprovel ® azinconywa.
I-Stenosis ye-aortic ne-mitral valve, i-hypertrophic cardiomyopathy.Njengamanye ama-vasodilators, kuyadingeka ukusebenzisa umuthi ngokuqapha ngokweqile ezigulini ezine-aortic noma i-mitral valve stenosis, i-hypertrophic cardiomyopathy.
I-aldosteronism eyinhloko.Iziguli ezine-aldosteronism eyisisekelo ngokuvamile aziphenduli ezidakamizweni ze-antihypertensive ezisebenza ngokunqanda i-renin-angiotensin. Ngakho-ke, ukusetshenziswa kwe-Aprovel ® ekwelashweni kweziguli ezinjalo akunconywa.
Izici ezijwayelekile.Ezigulini ezinomzimba we-vascular tone kanye ne-renal function ikakhulu kuncike emsebenzini we-renin-angiotensin-aldosterone (ngokwesibonelo, ezigulini ezinokwehluleka okukhulu kwenhliziyo okuguquguqukayo noma isifo sezinso esiyimbangela, kubandakanya ne-renal artery stenosis), ukwelashwa nge-ACE inhibitors noma abaphikisi be-receptor antisi, ezithinta lolu hlelo luhlotshaniswe ne-hypotension ye-acute, i-azotemia, i-oliguria, futhi ngezinye izikhathi ukwehluleka kwe-renal acute. Njenganoma imuphi umenzeli we-antihypertgency, ukwehla ngokweqile kwengcindezi yegazi ezigulini ezine-ischemic cardiopathy noma isifo se-ischemic senhliziyo kungaholela ekuqhekekeni kwe-myocardial noma stroke. Njengama-inhibitors we-angiotensin-converting enzyme, i-irbesartan nezinye izitha ze-angiotensin ngokusobala azisebenzi ekunciphiseni umfutho wegazi kubamele ubuhlanga obumnyama kunabamele ezinye izinhlanga, mhlawumbe ngenxa yokuthi izimo ezinendawo ephansi ye-renin zivame kakhulu phakathi kwesibalo seziguli zomhlanga omnyama onomfutho wegazi ophakeme .
Kuphikiswa ukusebenzisa umuthi ukwelashwa kweziguli ezinezinkinga ezingabalwa zofuzo - ukungabekezelelani kwe-galactose, ukuntuleka kwe-Lapp lactase noma i-glucose-galactose malabsorption.
Amandla wokuthonya isilinganiso sokuphendula lapho ushayela izimoto noma ezinye izindlela
Umphumela wekhono lokushayela imoto nokwenza umsebenzi odinga ukunakwa okwengeziwe awucwaningwanga. Izici ze-pharmacokinetic ze-irbesartan zibonisa ukuthi akunakwenzeka ukuthi zithinte leli khono.
Lapho ushayela imoto noma usebenza ngemishini, kufanele kukhunjulwe ukuthi isiyezi nokukhathala kungenzeka ngesikhathi sokulashwa.
Ama-diuretics namanye ama-antihypertensive agents. Amanye ama-antihypertensive agents angathuthukisa umphumela we-irotesartan, ngaphandle kwalokhu, i-Aprovel ® isetshenziswe ngokuphepha namanye ama-antihypertgency agents, anjenge-beta-blockers, blockburn calcium ende blockers kanye ne-thiazide diuretics. Ukwelashwa kokuqala ngomuthi ophakeme we-diuretics kungaholela ekuqothulweni komzimba futhi kwandise ingozi ye-hypotension ekuqaleni kokwelashwa nge-Aprovel ®.
Izithako ze-potassium kanye nama-diuretics agcina i-potassium. Isipiliyoni esitholwe ngokusetshenziswa kwezinye izidakamizwa ezithinta uhlelo lwe-renin-angiotensin-aldosterone sibonisa ukuthi ukusetshenziswa kanyekanye kweziguli ezigcina i-potassium, izithasiselo ze-potassium, esikhundleni se-potassium, noma ezinye izidakamizwa ezingakhulisa i-serum potassium (isb., i-heparin) inganyusa amazinga we-serum potassium. Ngakho-ke, akunconywa ukusebenzisa kanyekanye izidakamizwa ezinjalo ngomuthi "Aprovel ®".
ILithium. Ukwanda okuhlukile kokuxineka kwe-serum lithium kanye nobuthi bayo kwabonwa ngokusetshenziswa kanyekanye kwe-lithium ene-ACE inhibitors. Ezimweni ezingavamile, imiphumela efanayo iye yabonwa nge-irbesartan. Ngakho-ke, le nhlanganisela ayinconywa. Uma kunesidingo, kunconywa ukubhekwa ngokucophelela kwamazinga we-serum lithium.
Izidakamizwa ezingezona ezingena ezibangelwa ukuvuvukala. Ngokusebenzisa kanyekanye iziphikisi ze-angiotensin II nezidakamizwa ezingezona ze-steroidal ezilwa nokuvuvukala (ngokwesibonelo, ukukhetha ama-inhibitors we-COX-2, i-acetylsalicylic acid (> 3 g ngosuku) kanye nemithi engeyona eye-anti-antiidal yokuvimbela ukuvikelwa okungakhethi (i-antihypidal), umphumela wabo we-antihypertensive ungahle ube buthaka.
Njengama-inhibitors e-ACE, ukusetshenziswa kanyekanye kwe-angiotensin II antagonists kanye nama-NSAIDs kungandisa ingozi yokulimala kokusebenza kwe-renal, kufaka phakathi amathuba okuthola ukuhluleka kwe-renal acute, futhi kuholele ekukhuleni kwamazinga e-potumum we-serum, ikakhulukazi ezigulini ezinomsebenzi wezinso ongasebenzi. Le nhlanganisela kufanele isetshenziswe ngokuqapha, ikakhulukazi ezigulini esezikhulile. Kuyadingeka ukufeza ukugcwala okufanele koketshezi futhi kuqashwe umsebenzi wezinso ekuqaleni kokwelashwa okuhlanganisiwe futhi ngezikhathi ezithile ngemuva.
Imininingwane eyengeziwe ngokusebenzisana kwe-irbesartan. Ezifundweni zemitholampilo, i-hydrochlorothiazide ayizange ibe nomthelela kuma-pharmacokinetics we-irbesartan. I-Irbesartan yenziwa yi-CYP2C9 futhi, ngezinga elincane, yi-glucuronidation. Akukho ukusebenzisana okubalulekile kwe-pharmacokinetic noma kwe-pharmacodynamic kwaqalwa ngokusetshenziswa kanyekanye kwe-irbesartan nge-warfarin, okusungulwa yi-CYP2C9. Umphumela we-CYP2C9 inducers, njenge-rifampicin, ekhemisi yemithi ye-irbesartan ayifundwanga. I-pharmacokinetics ye-digoxin engashintshiwe ngenkathi ukusetshenziswa kwe-irbesartan.
I-Pharmacological. I-Irbesartan ngumphikisi onamandla, okhuthelayo, okhetha i-angiotensin II receptor antagonist (uhlobo AT 1). Kukholakala ukuthi ivimba yonke imiphumela ebaluleke ngokwasemzimbeni ye-angiotensin II eqondiswe nge-receptor ye-AT 1, kungakhathalekile ukuthi ngumthombo noma indlela yokuhlanganiswa kwe-angiotensin II. Umphumela okhethiwe wokuphikisana nama-angiotensin II receptors (i-AT 1) uholela ekwandeni kokuqoqwa kwe-renin ne-angiotensin II ku-plasma kanye nokwehla kokuxineka kwe-aldosterone ku-plasma. Lapho isetshenziswa kumithamo enconyiwe, izinga le-potumum le-serum alishintshi kakhulu. I-Irbesartan ayivimbi i-ACE (kininase II) - i-enzyme ekhiqiza i-angiotensin II, ukucekelwa phansi kwe-metabolic ye-bradykinin ngokwakhiwa kwama-metabolites angasebenzi. Ukubonisa umphumela wayo, i-irbesartan ayidingi ukwenziwa kwe-metabolic.
Ukusebenza kahle komtholampilo kwe-hypertension. I-Irbesartan yehlisa umfutho wegazi ngokushintshwa okuncane kwesilinganiso senhliziyo. Ukwehla kwengcindezi yegazi lapho kuthathwa kanye ngosuku kuncike kumthamo ngokwemvelo, kuthambekele ekufinyeleleni ethafeni elilingana nemithamo engaphezu kwama-300 mg. Imithamo ye-150-300 mg lapho ithathwa kanye ngosuku inciphisa umfutho wegazi olinganiswa lapho ulele emhlane noma uhleli ekugcineni kwesenzo (okungukuthi, amahora angama-24 ngemuva kokuthatha umuthi) ngokwesilinganiso esingu-8-13 / 5-8 mm RT. Ubuciko. (systolic / diastolic) ngaphezu kwe-placebo.
Ukwehla okukhulu kwengcindezi yegazi kutholakala emahoreni angama-3-6 ngemuva kokuthatha umuthi, umphumela we-antihypertensive uphikelela amahora angama-24.
Amahora angama-24 ngemuva kokuthatha imithamo enconyiwe, ukwehla komfutho wegazi kungama-60-70% uma kuqhathaniswa nokuncishiswa okuphezulu komfutho wegazi we-diastolic ne-systolic. Ukuthatha umuthi ngomuthi we-150 mg kanye ngosuku kunikeza umphumela (okungenani esenzweni kanye nesilinganiso samahora angama-24), kufana nalokho okutholwe ngokusatshalaliswa kwaleli dosi lansuku zonke kwimithamo emibili.
Umphumela we-antihypertensive wesidakamizwa "i-Aprovel ®" uvela ngaphakathi kwamasonto angu-1-2, futhi umphumela okhulunywe kakhulu utholakala emavikini angama-4-6 kusukela kuqale ukwelashwa. Umphumela we-antihypertensive uphikelela ekwelashweni okuhlala isikhathi eside. Ngemuva kokuyeka ukwelashwa, umfutho wegazi kancane kancane ubuyela kunani langempela. Ukudonswa kwemizwa yesifo ngendlela yokukhuphuka komfutho wegazi ngemuva kokuhoxa kwezidakamizwa akubonwa.
I-Irbesartan ene-thiazide-hlobo diuretics inika umthelela we-hypotensive.Ezigulini lapho i-irbesartan iyodwa inganikanga umphumela ofiselekayo, ukusetshenziswa kanyekanye komthamo ophansi we-hydrochlorothiazide (12.5 mg) nge-irbesartan kanye ngosuku kubangele ukwehla okukhulu komfutho wegazi okungenani ngo-7-10 / 3-6 mm Hg. Ubuciko. (I-Systolic / diastolic) ngokuqhathaniswa ne-placebo.
Ukusebenza kwesidakamizwa "Aprovel ®" akuxhomekile eminyakeni yobudala noma ubulili. Iziguli zomjaho omnyama ophethwe umfutho wegazi ophakeme zazinokuphendula okubuthaka kakhulu ku-monotherapy nge-irbesartan, kanye nezinye izidakamizwa ezithinta uhlelo lwe-renin-angiotensin. Uma kwenzeka ukusetshenziswa kanyekanye kwe-irbesartan ene-hydrochlorothiazide kumthamo ophansi (ngokwesibonelo, i-12.5 mg ngosuku), impendulo ezigulini zomjaho omnyama yafika ezingeni lokuphendula ezigulini zohlanga olumhlophe. Azikho izinguquko ezibalulekile zomtholampilo zamazinga we-serum uric acid noma i-urric ure acid eye yabonwa.
Ezinganeni ezingama-318 nasentsheni esukela eminyakeni eyisithupha kuya kwengu-16 ubudala, yaba nomfutho wegazi ophakeme noma ingozi yokuvela kwayo (isifo sikashukela, ukuba khona kweziguli ezinesifo somfutho emndenini), bafunda ukwehla komfutho wegazi ngemuva kokudonswa kwe-irbesartan - 0.5 mg / kg (low), 1 , I-5 mg / kg (isilinganiso) kanye ne-4.5 mg / kg (ephezulu) amasonto amathathu. Ekupheleni kweviki lesithathu, umfutho wegazi omncane we-systolic endaweni yokuhlala (SATSP) wehle ukusuka kwinqanaba lokuqala ngesilinganiso se-11.7 mm RT. Ubuciko. (Umthamo ophansi), 9.3 mmHg. Ubuciko. (Umthamo omaphakathi), 13.2 mmHg. Ubuciko. (Umthamo omkhulu). Akukho mehluko obalulekile ngokwezibalo obonakele phakathi kwemiphumela yalawa makhambi obonwa. Ukushintshwa kokushintshiwe okusho ukuthi ubuncane bokuhlala kwe-diastolic blood pressure (DATSP) bekuyi-3.8 mmHg. Ubuciko. (Umthamo ophansi), 3.2 mmHg. Ubuciko. (Umthamo omaphakathi), 5.6 mmHg. Ubuciko. (Umthamo omkhulu). Ngemuva kwamasonto amabili, iziguli zaphinde zenziwa kabusha ukuze zisebenzise umuthi osebenzayo noma i-placebo. Ezigulini
I-placebo yayisetshenzisiwe, i-SATSP ne-DATSP lakhula ngo-2.4 no-2.0 mm Hg. I-Art., Kanye nalabo abasebenzisa i-irbesartan kumithamo ehlukahlukene, izinguquko ezihambisanayo zaziyi-0,1,0.3 mm RT. Ubuciko.
Ukusebenza kahle kwemitholampilo ezigulini ezinomfutho wegazi ophezulu, isifo sezinso, nesifo sikashukela sohlobo II . Ucwaningo lwe-IDNT (irbesartan for diabetesic nephropathy) lubonise ukuthi i-irbesartan ibambezela ukuqhubekela phambili kokulimala kwezinso ezigulini ezihluleka ukuqina kwezinso kanye ne-proteinuria enzima.
I-IDNT kwakuyisifundo esiphindwe kabili, esilawulwayo esiqhathanisa ukungasebenzi komzimba nokushona kweziguli eziphathwe nge-Aprovel ®, amlodipine, ne-placebo. Kuhanjelwe iziguli ezingama-1715 ezinesifo somfutho wegazi ophakeme nohlobo II sikashukela, lapho kwakukhona khona i- proteinuria ≥ 900 mg / ngosuku kanye ne-serum creatinine level ebangeni le-1,0-8.0 mg / dl. Imiphumela yesikhathi eside (ngokwesilinganiso seminyaka engu-2.6) yemiphumela yokusebenzisa umuthi i- “Aprovel ®” yafundwa - umthelela ekuqhubekeni kwesifo sezinso nokufa okuphelele. Iziguli zithole imithamo emincane ye-75 mg kuye kuma-300 mg (umthamo wokulondolozwa) we-Aprovel ®, 2,5 mg kuya ku-10 mg we-amlodipine noma i-placebo, ngokuya ngokubekezelelwa. Eqenjini ngalinye, iziguli zazivame ukuthola izidakamizwa ezingama-2-4 ze-antihypertensive (isb., Ama-diuretics, ama-beta-blockers, ama-alpha-blockers) ukufeza umgomo onqunyelwe wona - umfutho wegazi ezingeni of 135/85 mm Hg. Ubuciko. noma ukwehla kwengcindezi ye-systolic ngo-10 mm RT. Ubuciko., Uma izinga lokuqala lali> 160 mm RT. Ubuciko. Izinga lokucindezela kwegazi elitholwe ngalo latholakala kuma-60% eziguli eqenjini le-placebo, kwathi kuma-76% kanye nama-78% emaqenjini athola i-irbesartan ne-amlodipine, ngokulandelana. I-Irbesartan inciphisa kakhulu ubungozi bokuphela kwe-endpoint eyinhloko, ehlanganiswe nokuphindeka kabili kwe-serum creatinine, isifo sezinso esisekupheleni, noma ukufa okujwayelekile. Cishe ama-33% eziguli afinyelele ekugcineni okuhlanganisiwe eqenjini le-irbesartan kuqhathaniswa ne-39% ne-41% eqenjini le-placebo ne-amlodipine; ukuncishiswa okungama-20% uma kuqhathaniswa ne-placebo (p = 0.024) kanye nokwehla okungama-23% ngesihlobo ingozi ngokuqhathaniswa ne-amlodipine (p = 0.006). Ngenkathi lapho kuhlaziywa izingxenye zomuntu ngamunye zokugcina, kwavela ukuthi akubanga namthelela wokufa okuphelele, ngasikhathi sinye, kwakukhona ukuthambekela okunciphile kokuncipha kwamacala esigaba sokugcina sesifo sezinso kanye nokwehla okukhulu kwesibalo samacala okuphindwe kabili kwe-serum creatinine.
Ukuhlolwa komphumela wokwelashwa kwenziwa kuma-subgroups ahlukahlukene, asatshalaliswa ngesisekelo sobulili, ubuhlanga, ubudala, isikhathi sesifo sikashukela, umfutho wegazi wokuqala, i-serum creatinine okuhlushwa kanye ne-albhamuin excretion rate. Ezingxenyeni ezingaphansi zabesifazane nabamele ubuhlanga obumnyama, obabalelwa ku-32% no-26% wabantu bonke abafundwayo, ngokulandelana, akubanga khona nguthuthu olubonakalayo esimweni sezinso, yize izikhathi zokuzithemba zingakufakanga lokhu. Uma sikhuluma nge-endpoint yesibili - isehlakalo senhliziyo esiqedile (esibulalayo) noma esingazange siphele (okungeyona eyeqiniso) ukufa, khona-ke akukho mehluko phakathi kwamaqembu amathathu kulo lonke inani labantu, yize izehlakalo zokungahambi kahle kwe-myocardial infarction (MI) zikhulu kwabesifazane futhi ngaphansi kwabesilisa eqenjini le-irbesartan kuqhathaniswa neqembu le-placebo. Uma kuqhathaniswa neqembu le-amlodipine, izehlakalo zokulimazeka okungenamsoco nesifo sohlangothi esinezimbumbulu zaziphezulu kwabesifazane abaqhamuka eqenjini le-irbesartan, kanti isibalo samacala asesibhedlela ukwehluleka kwenhliziyo kuso sonke isibalo sabantu sasingaphansi. Ayikho incazelo ekholisayo yemiphumela enjalo etholakele kwabesifazane.
Ucwaningo "Umphumela we-irbesartan ku-microalbuminuria ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo II kanye ne-hypertension" (IRMA 2) ukhombise ukuthi i-irbesartan engama-300 mg ezigulini ezine-microalbuminuria ibambezela ukuqhubekela phambili ekubonakaleni kwe-proteinuria ebonakalayo. I-IRMA 2 isifundo esiphindwe kabili esingaboni, esilawulwa yi-placebo esivivinya ukushona kweziguli ezingama-590 ezinesifo sikashukela sohlobo II sikashukela esine-Microalbuminuria (30-300 mg ngosuku) nomsebenzi ojwayelekile wezinso (i-serum creatinine ≤ 1.5 mg / dL emadodeni nase-300 mg ngosuku kanye nokwanda kwe-SHEAS okungenani nge-30% yezinga lokuqala). Umgomo onqunyelwe ngaphambilini kwakuwukucindezela kwegazi ezingeni le-≤135 / 85 mmHg. Ubuciko. Ukusiza ukufeza le nhloso
uma kunesidingo, kwethulwa ama-antihypertensive agents (ngaphandle kwama-inhibitors e-ACE, ama-angiotensin II receptor antagonists kanye ne-calcium channel dihydropyridine blockers). Kuwo wonke amaqembu ezokwelapha, amazinga okucindezela kwegazi atholakala ezigulini ayefana, kodwa eqenjini elithola ama-300 mg we-irbesartan, izifundo ezimbalwa (5.2%) kunalabo abathola i-placebo (14.9%) noma i-150 mg ye-irbesartan ngosuku (9.7%), ifinyelele endaweni yokugcina - proteinuria ecacile. Lokhu kukhombisa ukwehliswa okungu-70% engcupheni yokulinganisa ngemuva komthamo omkhulu ngokuqhathaniswa ne-placebo (p = 0.0004). Ukwanda kanyekanye kwesilinganiso sokuhlunga kwe-glomerular (GFR) ezinyangeni ezintathu zokuqala zokwelashwa akuzange kubonwe. Ukunciphisa ukuqhubekela phambili ekubonakaleni kwe-proteinuria ekhulunywe kabi emtholampilo kwabonakala ngemuva kwezinyanga ezintathu, futhi lo mphumela wagcina ngesitimela seminyaka emi-2. Ukubuyela emuva ku-standardoalbuminuria (
Izici eziyisisekelo ze-physicochemical
Amaphilisi angu-75 mg : amaphilisi we-biconvex amhlophe noma acishe abe mhlophe aqoshwe ngesimo senhliziyo ngakolunye uhlangothi kanye nezinombolo "2771" ngakolunye
Amaphilisi we-150 mg : amaphilisi we-biconvex amhlophe noma acishe abe mhlophe aqoshwe ngokuma kwenhliziyo ngakolunye uhlangothi kanye nezinombolo "2772" ngakolunye
I-300 mg amaphilisi : amaphilisi we-biconvex amhlophe noma acishe abe mhlophe aqoshwe ngokuma kwenhliziyo ngakolunye uhlangothi kanye nezinombolo "2773" ngakolunye
Imiphumela emibi yesidakamizwa
Nansi imiyalo enjalo yokusetshenziselwa ukulungiselela i-Aprovel. Ama-analogs alo athathwe cishe ngendlela efanayo. Umuthi cishe awunawo nomthelela emsebenzini wenhliziyo. Kodwa-ke, kufanele idakwe, yiqiniso, kuphela ngaphansi kokuqondisa udokotela. Kwezinye izimo, lo muthi unemiphumela emibi ehlukahlukene emzimbeni wesiguli. Isibonelo, ukucindezela kwesiguli kungahle kwehle kakhulu. Kulokhu, isiguli sizothola izimpawu ezifana nokuthi:
Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa okungalawulwa kwalesi sidakamizwa kungaholela ezinkingeni ezinkulu njengokuthi ukungasebenzi kahle kwesibindi (kufaka phakathi i-hepatitis) noma izinkinga zezinso.
Isiyezi esincane nakho okungenzeka isiguli sisebenzisa i-Aprovel. I-analogue yayo (cishe noma yimuphi) ivame ukudala umphumela ofanayo. Ngakho-ke, ngesikhathi sokwelashwa usebenzisa imali enjalo, kufanele uqaphele ngangokunokwenzeka lapho ushayela imoto nalapho wenza umsebenzi odinga ukunakwa okwengeziwe.
Ukuqapha kunconywa emacaleni alandelayo:
I-stenosis ye-aorta noma i-mitral valve, imithambo yezinso,
I-CHD (isifo senhliziyo)
ngokwehluleka kwezinso, kuyadingeka ukulawula izinga le-potassium ne-creatinine egazini,
Ukudla okungenawo usawoti, okuhambisana nohudo, ukugabha,
isifo senhliziyo esithintekayo,
I-hypovolemia, ukuntuleka kwe-sodium ngemuva kokwelashwa kwezidakamizwa nge-diuretics.
Kuyadingeka ukuqapha isimo seziguli ku-hemodialysis.
Ungayithatha kanjani i-Aprovel
Umuthi wenzelwe ukuphathwa ngomlomo. Ngasikhathi sinye, ijubane namandla okufakelwa emathunjini amancane azimele ekudleni kokudla. Amathebulethi kufanele adakwe aphelele ngaphandle kokuhlafuna. Umthamo ojwayelekile esigabeni sokuqala sokwelashwa ngu-150 mg ngosuku. Iziguli ezinomfutho wegazi ophezulu odinga ukwelashwa okwengeziwe kwe-antihypertensive zithola ama-300 mg ngosuku.
Ngokuncipha okunganele kwengcindezi yegazi, ukwelashwa okuhlangene ne-Aprovel, i-beta-blockers, i-calcium ion antagonists isetshenziselwa ukufeza okuhlosiwe.
Amathebhulethi e-aprovel kumele adakwe aphelele ngaphandle kokuhlafuna.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi umthamo nobude besikhathi sokwelashwa kusungulwa kuphela uchwepheshe wezokwelapha.
Lapho uthatha i-Aprovel ezigulini ezinesifo sikashukela, ingozi yokuthuthuka kwe-hyperkalemia iyanda.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi umthamo nobude besikhathi sokwelashwa kusungulwa kuphela uchwepheshe osuselwa kuzinimpawu zomuntu ogulayo, idatha yaselebhu kanye nokuhlolwa ngokomzimba.
Ukwemukelwa kwesifo sikashukela sohlobo 1 kufanele kuxoxwe nodokotela wakho, ozokwenqabela ukusetshenziswa kwe-Aprovel noma ozolungisa umthamo wansuku zonke. Uhlobo 2 lwesifo sikashukela esinga-insulin, umthamo onconywayo ungama-300 mg ngosuku kanye.
Iziguli ezinesifo sikashukela zinengozi eyengeziwe yokuthuthukisa i-hyperkalemia.
Imiphumela emibi ye-Aprovel
Ukuphepha komuthi kwaqinisekiswa esivivinyweni somtholampilo lapho khona iziguli ezingama-5,000 zahlanganyela. Amavolontiya ayi-1300 ahlushwa umfutho wegazi ophakeme futhi ayithatha le mithi izinyanga eziyisithupha. Ezigulini ezingama-400, isikhathi sokwelashwa sadlula unyaka. Isimo semiphumela emibi besingaxhomekekanga kumthamo owamukelekayo, ubulili nobudala besiguli.
Ukubonakaliswa okungalungile kokusebenzisa umuthi ngendlela yesifo sohudo kungenzeka.
Njengomphumela oseceleni we-Aprovel, ukushisa kwenhliziyo kungenzeka.
Ukusuka kwesibindi kanye nepheshana lesibindi, i-hepatitis kungenzeka.
Esifundweni esilawulwa yi-placebo, amavolontiya angu-1965 athola ukwelashwa kwe-irbesartan izinyanga ezi-1-3. Ezimweni eziyi-3.5%, iziguli zaphoqeleka ukuthi zilahle ukwelashwa kwe-Aprovel ngenxa yemingcele emibi yeelebhu. I-4.5% yenqabile ukuthatha i-placebo, ngoba azizwanga ngcono.
Ukubonakaliswa okungalungile endaweni yokugaya ukudla kuboniswa njenge:
isifo sohudo, ukuqunjelwa, ukuthopha,
ukuthuthukisa umsebenzi wama-aminotransferase kuma-hepatocytes,
Ukusuka ohlangothini lwesibindi kanye nephephabhuku i-biliary, i-hepatitis kungenzeka, ukwanda kokuhlungelwa kwe-plasma kwe-bilirubin, okuholela ku-cholestatic jaundice.
Kusuka ohlelweni lokuphefumula
Umphumela kuphela wohlelo lokuphefumula ukukhwehlela.
Ezigulini ezisengozini yokuthola ukwehluleka kwezinso, ukungasebenzi kwezinso kungakhula.
Phakathi kokubonakaliswa kokungafani komzimba, i-edema kaQuincke iyahlukaniswa.
Kusuka ohlelweni lwezinhliziyo
I-Orthostatic hypotension ivame ukubonakaliswa.
Phakathi kokubonakaliswa kokungafani komzimba yilezi:
ukuqunjelwa, ukulunywa, i-erythema,
Iziguli zithambekele ekuphenduleni kwe-anaphylactic zidinga ukuhlolwa kokungezwani komzimba. Uma umphumela uba muhle, umuthi kufanele ushintshwe.
Umuthi awuthinti ngqo ukusebenza kwengqondo komuntu. Ngasikhathi sinye, ukusabela okungekuhle kungahle kube engxenyeni yesistimu yezinzwa ephakathi nendawo. Ngenxa yalokho kunconyelwa ukwenqaba ukushayela imoto, ukusebenza ngezinqubo eziyinkimbinkimbi, nakweminye imisebenzi edinga ukuphendula okusheshayo nokuqina ngesikhathi sokulashwa kwezidakamizwa.
Kunconywa ngesikhathi sokulashwa kwezidakamizwa ukwenqaba ukushayela.
Iziguli ezisebenza ngokungafanele kwesistimu yezinhliziyo zinengozi enkulu yokuthuthuka kwe-hypotension eyingozi.
Ngokuncipha okunamandla komfutho wegazi ngokumelene ne-ischemia, i-myocardial infarction kungenzeka.
Umuthi awuvunyelwe ukusetshenziswa ngesikhathi sokukhulelwa. Njengezinye izidakamizwa ezithinta uhlelo lwe-renin-angiotensin-aldosterone, i-irbesartan ingena ngokukhululekile emgoqweni we-placental. Ingxenye esebenzayo iyakwazi ukuthinta ukuthuthukiswa kwe-intrauterine kunoma yisiphi isigaba sokukhulelwa. Kulokhu, i-irbesartan ikhishwa ubisi lwebele, mayelana nakho okudingekayo ukuyeka ukuphuma kwe-lactation.
Sebenzisa umsebenzi wesibindi okhubazekile
Uma kwenzeka ukungasebenzi kahle kwe-hepatocyte, isidakamizwa asinconywa.
2% kuphela wezidakamizwa oshiya umzimba ungene ezinso, ngakho-ke abantu abane-pathologies yezinso abadingi ukwehlisa umthamo.
Ngokusebenzisa kanyekanye i-Aprovel neminye imithi, ukusabela okulandelayo kuyabonakala:
I-Synergism (ethuthukisa imiphumela yokwelapha yazo zombili izidakamizwa) ngokuhlanganiswa nezidakamizwa ze-antihypertensive, i-calcium Channel inhibitors, i-thiazide diuretics, i-beta-adrenergic blockers.
I-Serum potaziyamu egazini ikhuphuka ngezidakamizwa eziqukethe i-heparin kanye ne-potassium.
I-Irbesartan inyusa ubuthi be-lithium.
Ngokuhambisana nezidakamizwa ezingezona ze-steroidal ezilwa nokuvuvukala, ingozi yokuhluleka kwezinso, i-hyperkalemia iyanda, futhi ngenxa yalokho, ukusebenza kwezinso kufanele kugadwe ngesikhathi sokwelashwa kwezidakamizwa.
Kukhona ukwanda kwemiphumela yokwelashwa ye-Aprovel ngokuhlanganiswa nezidakamizwa ze-antihypertensive, i-calcium Channel inhibitors, ne-thiazide diuretics.
Ngokuphathwa kanyekanye kwe-Aprovel neHeparin, ukugcwala kwe-serum ye-potassium egazini kuyakhuphuka.
Ingxenye esebenzayo ye-Aprovel ayithinti umphumela wokwelapha we-Digoxin.
Umenzeli we-antihypertgency wenqatshelwe ukuthathwa kanyekanye ngemikhiqizo yotshwala.I-ethyl alcohol ingadala ukuhlangana kwamangqamuzana abomvu egazi, ukuhlanganiswa kwayo okungavimba ukukhanyiswa komkhumbi. Ukuphuma kwegazi kunzima, okubangela ukwanda kwesilinganiso senhliziyo nokwanda kwengcindezi. Ngokuphikisana nesizinda sokulashwa kwezidakamizwa, lesi simo sizobangela ukuwa kwemithambo yegazi.
Phakathi kwama-analogues ahlelekile, isenzo sawo esisuselwa kwisithako esisebenzayo se-irbesartan, kunezidakamizwa zombili zokukhiqiza zaseRussia nezangaphandle. Ungafaka amaphilisi we-Aprovel ngemithi elandelayo:
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ngaphambi kokushintsha umuthi omusha kuyadingeka ukubonisana nodokotela wakho. Ukuzifaka esikhundleni sakho akuvunyelwe.
Umenzeli we-antihypertgency wenqatshelwe ukuthathwa kanyekanye ngemikhiqizo yotshwala.
Ungabeka amaphilisi we-Aprovel esikhundleni se-Irbesartan.
Umuthi uthengiswa ngomuthi onikezwe wona.
U-Olga Zhikhareva, udokotela wezifo zenhliziyo, uSamara
Ikhambi elisebenzayo lokwehlisa umfutho wegazi ophakeme. Ngisebenzisa ekwelashweni komtholampilo njenge-monotherapy noma ukwelashwa okuyinkimbinkimbi. Angigcinanga umlutha. Iziguli azincomi ukuthatha isikhathi esingaphezu kwe-1 ngosuku.
U-Antonina Ukravechinko, udokotela wezifo zenhliziyo, uRyazan
Inani elifanele lemali, kepha ngincoma ukuqaphela kulezi ziguli ezine-mitral noma i-aortic valve stenosis. Izingane nabesifazane abakhulelwe benqatshelwe ngokuphelele ukuthatha amaphilisi e-Aprovel. Phakathi kwemiphumela emibi, ukuvela komzimba kuye kwenzeka. Ngasikhathi sinye, naphezu kokungaphenduki kahle okuvela emzimbeni, isidakamizwa sisize ukwehlisa umfutho wegazi ophakeme.
Uma izimpawu zomtholampilo zokweqisa kwemithi ziqala ukuvela, khona-ke kufanele ufune usizo lodokotela.
ICairo Airam, eneminyaka engama-24, iKazan
Nginomfutho wegazi ophakeme. Ekuseni ikhuphukela ku-160/100 mm Hg. Ubuciko. Wathatha izidakamizwa eziningi ukwehlisa umfutho wegazi, kepha amaphilisi we-Aprovel kuphela asizayo. Ngemuva kokufaka isicelo, ngokushesha kuba lula ukuphefumula, kuzwakale umsindo wegazi emathempelini. Into esemqoka ukuthi umphumela ngemuva kokuhoxiswa kwezidakamizwa uphikelela isikhathi eside. Udinga ukuphuza izifundo futhi uvakashele udokotela wakho njalo. Angibonanga imiphumela emibi.
U-Anastasia Zolotnik, oneminyaka engama-57, eMoscow
Umuthi wawungalingani nomzimba wami. Ngemuva kwamaphilisi, kwaqhamuka imidumba, ukuvuvukala kanye nokuhanjiswa kanzima. Ngizamile ukubuyisana isonto lonke, ngoba ingcindezi inciphile, kepha ukungahambisani nakho akusalanga. Kwakudingeka ngiye kudokotela ukuze ngizokhetha esinye isidakamizwa. Ngithande ukuthi ukuvela kwesifo kungaqhamuki, ngokungafani nezinye izindlela zokunciphisa umfutho wegazi.
Imiphi imithetho okufanele ibonwe yisiguli
Lapho uthatha umuthi "Aprovel" wezidakamizwa, izichasiso kanye nemisho ezinhlobonhlobo eziningi, isiguli kufanele sivakashele udokotela ohambela njalo. Akunakusho ukuthi kufanele ushintshe umthamo ngaphandle kokuthintana nodokotela. Ukushintsha lo muthi nomunye ngaphandle kokubonana nochwepheshe kuyinto, futhi kuvinjelwe.
Kungcono ukuthatha amaphilisi we-Aprovel ngasikhathi sinye. Vele, akufanele uphuze lo muthi uma uphelelwe yisikhathi noma uma ugcinwe ngokungafanele.
Ungawaphuza lamaphilisi ngaphambi nangemva kokudla. Ukuba khona noma ukungabikho kokudla esiswini empeleni akuthinti ukufakwa kwabo egazini.
Izici zokusetshenziswa kwezindawo
Ama-analogues alo muthi, acatshangelwe yithina ngenhla, enziwe ngesisekelo sento efanayo, anemiyalo efanayo yokusebenzisa. Kepha abanye babo badinga ukudakwa noma kunjalo okuhlukile kancane kune-Aprovel. I-analogue yalo muthi, i-Converium, ngokwesibonelo, inconywa ukuthi iphuzwe ekuseni ngaphambi kokudla.
Vele, baneziyalezo ezihluke ngokuphelele zokusetshenziswa kanye nezingena esikhundleni salesi sidakamizwa i-"Lozap" ne "Valz" ngokunye okusebenzayo. Umthamo ojwayelekile wosuku lokuqala ngowama-50 mg ngosuku. Ezigulini ezinokwehluleka kwenhliziyo okungapheli, lo muthi uvame ukubekelwa inani elingadluli ku-12 mg ngosuku. I-Valz ivame ukuthathwa ku-80 mg ngosuku.
Ekwehlulekeni kwenhliziyo okungapheli, lo muthi wehliselwa ku-40 mg ngosuku.
Okufanelwe ukubuyekezwa kwezidakamizwa
Iziguli, njengodokotela, zivame ukudumisa i-Aprovel. Ukubuyekezwa (izichasiselo zakhe zivame ukungasebenzi kahle) ezigulini, uthole okungcono kakhulu. Isibonelo, iziguli eziningi zikholelwa ukuthi inemiphumela emincane kakhulu kunemithi ye-Lozap neValz. Kusetshenziswa leli thuluzi, iziguli eziningi zikwazile ukuletha ingcindezi yokuthi ibe yangempela ngesonto.
Imithetho yokugcina umuthi
Ngakho-ke, sithole ukuthi lokho okulungiselelwe yi- “Aprovel” kumelela (imiyalo yokusebenzisa, ukubuyekezwa, ama-analogues). Lo muthi, njengoba ubona, muhle kakhulu. Kodwa-ke, izosebenza ngempumelelo, kunjalo, kuphela uma igcinwe kahle.
Gcina iphakethe nalo mkhiqizo kuphela egumbini elomile. Ngasikhathi sinye, izinga lokushisa elisendlini akufanele libe ngaphezulu kwama-30 C. Yebo, amaphilisi kufanele agcinwe ukuze izingane zingakwazi ukufinyelela kuzo.
Indima ebalulekile kwabaningi lapho ukhetha imithi idlalwa ngumenzi. I-Aprovel yenziwa yinkampani yaseFrance iSanofi. Indaba yeSanofi yaqala ngonyaka we-1973, lapho kwathathwa isinqumo sokuthi kwakheke umkhiqizo wezidakamizwa ngesisekelo senkampani yezwe yokuhlanza uwoyela. Ngemuva kweminyaka eyi-10, imikhiqizo yaqala ukuthengiswa ezimakethe zase-United States naseJapan.
USanofi manje ukhiqiza imijovo yokugoma, imishanguzo yesifo sikashukela nemithi yokwelapha izifo zohlelo lwezinhliziyo. Ukusetshenziswa kwe-Aprovel kumithamo emibili - 150 no-300 mg.
Kunamahhovisi angaba yikhulu abekwe emazweni ahlukene. Enye yazo iseMoscow. Ikheli lokuthumela izikhalazo nezifiso liboniswa kwimiyalo esetshenzisiwe.
Izinkomba ezilandelayo zokwelapha izidakamizwa ziyahlukaniswa:
umfutho wegazi oyisisekelo
i-hypertension yesibili ye-arterial,
Ngokusho kwemiyalo esetshenzisiwe, i-Aprovel yezidakamizwa isebenza kakhulu ekuphanjelweni kwe-hypertension ye-arterial. Lesi sifo sibonakaliswa ngokwanda okuqhubekayo kwengcindezi engaphezu kwe-140-90 mm Hg. Ubuciko. Izimbangela ezahlukahlukene zihambisana nokukhula kwayo, okungahambisani nokuboniswa kokunye ukuxilongwa. Umfutho wegazi ophakeme uthinta kabi imithambo yegazi, inhliziyo nezinso. Bhaliswa njalo ngonyaka ngabantu abayizigidi eziyi-9.
Ngokungafani nefomu eliphambili, umfutho wegazi wesibili ungumphumela weminye i-pathologies emzimbeni. Ukuqeda lesi sifo, indima ebalulekile idlalwa ukusungulwa kwembangela yangempela okuholele ekuqaleni komfutho wegazi ophezulu. I-Aprovel isetshenziswa ngendlela esebenzayo kwifomu lesibili, elibhalwe emiyalweni yokusetshenziswa.
I-Nephropathy ifakiwe ohlwini lwezinkomba. Lesi sifo siholela ekusebenzeni okungasebenzi kahle kwe-renal ngenxa yomonakalo wezinto ezisetshenziswayo gluserular kanye namaseli e-epithelial asebenzayo esitho.
Ukwelapha ngamathebulethi we-Aprovel kulula kakhulu futhi kuyaqondakala esigulini. Ukuthola umphumela ozinzile, ukubamba okwanele nsuku zonke kwanele. Imiyalo esetshenzisiwe yazisa ukuthi ukwelashwa kuzimele kokudla. Ithebhulethi lingadakwa ngemuva kokudla. Umkhiqizo kumele ugezwe phansi ngenani elanele lamanzi.
Inani elinconyiwe lomuthi lincike ekuxilongeni. Odokotela balule ukuthi ukuqala ngo-150 mg ngosuku, ezimweni ezikhethekile kungenzeka ukwandisa umthamo futhi uthathe ama-300 mg we-Aprovel. Imiyalo yokusebenzisa inquma le lethamo njengenani eliphezulu lezinsuku.
Kwesinye isikhathi nge-hypertension enzima ye-arterial, isiguli sinikezwa ukwelashwa okuhlanganisiwe, njengoba kuchazwe kwimiyalo yokusetshenziswa. Ngaphezu kwamathebulethi we-Aprovel, ama-diuretics anqunyelwe ngokungeziwe. Lawa ngamathuluzi asiza ukusheshisa ukuqeda uketshezi emzimbeni. Bafaka isandla ekwandisweni kwe-lumen yemithambo yegazi, ngenxa yalokho, yehlisa umfutho wegazi.
Ithebula 2. Umthamo onconyiwe wamaqembu eziguli ngazinye.
Inani lomuthi (ku-mg ngosuku)
Kubantu abangaphezu kweminyaka engama-65 150-300 Ngokungafani nezidakamizwa eziningi, ukwelashwa akudingi ukwehliswa komthamo. Ithuluzi alaziwa ukuthi lisebenza kakhulu nje kuphela, kodwa futhi alinangozi kubantu asebekhulile
Ukuphazamiseka kwesibindi (emnene / ngokulinganiselayo) 150-300 Imiyalo yokusebenzisa ayisho ukuthi kudingeka yini ukunciphisa umthamo. Kodwa-ke, azikho izifundo eziqinisekisa ukuphepha kokusetshenziswa kwomuthi ezigulini ezinjalo
Izinkinga zezinso 150-300 Hhayi inkomba yokunciphisa umthamo. Inani eliphezulu le-Aprovel lingama-300. 300 mg lingumkhawulo kubantu abanezinso ezinempilo.
Yehle ivolumu yegazi ejikelezayo (i-hypovolemia) - Isimo kumele simiswe ngaphambi kokwelashwa usebenzisa i-Aprovel
I-Hyponatremia - Kuyafana nokwedlule
Ukubuyekezwa kweziguli ezithatha umuthi
Imibono yabantu ihlukene phakathi. Kokubili ukubuyekezwa okuhle nokubi. I-Aprovel idunyiswa:
isenzo esisheshayo (emva kwemizuzu engu-15-30),
amandla okuthenga kalula kumakhemisi asebenza yonke indawo,
Kodwa-ke, kukhona nokubi. Isibonelo, umuthi unentengo ephezulu kakhulu. Kukhona amathuluzi angabizi kakhulu. I-Aprovel ihlukaniswa uhlu oluhlaba umxhwele lwemiyalo ekhethekile, ithuluzi lingahola ekuthuthukiseni imiphumela emibi.
Ngokusekelwe ku-irbesartan, le mithi elandelayo iyatholakala engathatha indawo ye-Aprovel:
I-Irsar. Intengo ye-Irsar iphindwe izikhathi ezingama-2,5 kunezakwabo waseFrance. Kuyinto blocker ekhethiwe ye-receptor enezakhi eziningana ezingeziwe.
I-Irbesartan. Umuthi waseSpain, obuye ubekelwe ukuphazamiseka kwe-ventricle yesobunxele kanye nokwehluleka kwenhliziyo ngendlela engapheli.
I-Irbesartan Canon (Russia).